Layout Fiican, oo bilaash ah Mac App Store muddo xaddidan | Waxaan ka socdaa mac
Iyada oo Layout Fiican, Mac-kaaga ayaa diyaar u noqon doona in loo isticmaalo sidaad rabto. Maamulaha desktop-kan ayaa kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho iskudhafka daaqadaha midkastoo aad rabto iyo codsiyada aad isticmaasho maalintaada maalin.
Ka faa'iideyso fursadda hadda maadaama ay tahay qalab dhameystiran, qiimo caadi ah € 6.99, Waxaa laga heli karaa laga bilaabo maanta iyo waqti xaddidan oo bilaash ah oo ku yaal Mac-keena App Store.
Qaab-dhismeedka ugu Fiican, oo loo tixgeliyo mid ka mid ah maareeyayaasha daaqadaha ugu fiican iyo muujiyeyaasha muuqaalka ee Mac-da, ayaa bilaash ku ah "Bakhaarka" wakhti xaddidan. Fursad qaas ah oo lagu raaxeysto faa'iidooyinka helitaanka miis abaabulan, gaar ahaan markaan la shaqeyno dhowr codsi ama tab isla waqtigaas.
Intaa waxaa dheer, qalabkan waxtar leh, wuxuu leeyahay amarro kumbuyuutar oo kuu oggolaanaya inaad si fudud ugu dhaqaaqdo inta udhaxeysa barnaamijyada kaladuwan ee furan, wax ka beddel cabbirka mid kasta oo iyaga ka mid ah, oo si fudud oo raaxo leh ugu beddela dhexdooda.
Iyada oo horumarinta wax soo saarka hadaf ahaan, Qaab-dhismeedka ugu Fiican ayaa soo jeedinaya fudeyd aan la qiyaasi karin si uu nooga caawiyo abaabulka miiskeena, si loo helo shaqo nidaamsan oo aan mashquulin.
Si buuxda loo hagaajin karo, waxay noqon doontaa farxad kuwa u hanqal taagaya inay awoodaan inay xakameeyaan mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka ku jira Mac-ga. Waxaan dooran karnaa cabbirka iyo qaabka saxda ah ee aan u dooneyno barnaamij kasta oo ka furan shaashaddayada, si aan u aragno oo ula shaqeyn karno wax ka badan hal barnaamij isla waqtigaas. Daawashada fiidiyow inta aan aqrinayno joornaalka oo aan ku soo aruurineyno dareenkeena dukumiinti dhib dambe ma noqon doonto.
Hadda, iyo waqti xaddidan, waxaan haynaa codsigan cajiibka ah ee bilaashka ah (hore € 6.99). Ha seegin fursaddan inaad ku hesho codsigan adigoon gabi ahaanba wax lacag ah bixin. Ma ogin inta uu dalabkani soconayo, laakiin waxaan u maleyneynaa inuusan dheereyn doonin, ee u kac.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Layout Fiican, oo bilaash ah Mac App Store muddo xaddidan